3 Nzọụkwụ naghachi overwritten File si Mac
Mac overwritten File Iweghachite: 3 Nzọụkwụ naghachi overwritten File si Mac
1 Olee naghachi overwritten Files na Mac?
Hi ... m a ndụmọdụ-abịa ka ha re-wụnye ụfọdụ faịlụ taa. N'ụzọ dị mwute, ọ overwrote a faịlụ na a ọhụrụ faịlụ site na otu aha. Ugbu a, anyị na-esi ụbọchị ole na ole ọrụ. Bụ n'ebe ọ bụla o kwere omume ụzọ si n'ebe na ike naputa ihe dekwasịzie faịlụ site Mac?
Ọ bụrụ na ị nọgidere na-enwe a nkwado ndabere akwụkwọ nke gị Mac tupu dekwasịzie, ị pụrụ iji Time Machine iji weghachite ha. Ọ bụrụ na ọ dị mwute ikwu na ị nwere bụghị, i ka na-adịghị mkpa ichegbuwe onwe. The dekwasịzie faịlụ ndị ka n'ime gị Mac. Ihe ị chọrọ ime bụ ịkwụsị iji gị Mac na anya n'ihi na a Mac data mgbake omume na-enyere gị aka.
Ebe i nwere ike na-Wondershare Data Recovery for Mac dị ka a na-agbalị. Nke a Mac Data mgbake software bụ ike naghachi a dịgasị iche iche nke faịlụ gị Mac, n'agbanyeghị gị faịlụ na-overwritten na gị Mac ma ọ bụ gị na igwefoto dijitalụ, mpụga ike disk, ebe nchekwa kaadị, wdg a na usoro nakwa awade a ikpe mbipute n'ihi na ị na iṅomi gị Mac ma ọ bụ ngwaọrụ gị maka dekwasịzie tupu ị na-akwụ maka mgbake.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute ugbu a.
2 Naghachi overwritten File si Mac on 3 Nzọụkwụ.
Cheta na: Nke a na usoro naanị akwado Mac mgbake. Windows ọrụ kwesịrị download Wondershare Data Recovery maka Windows naghachi dekwasịzie faịlụ site Windows kọmputa.
Nzọụkwụ 1 Mgbe wụnye na-agba ọsọ Wondershare Data Recovery for Mac na gị Mac. Ị ga-ahụ a window na awade 3 mgbake ụdịdị. Naghachi dekwasịzie faịlụ, biko họrọ "Echefuola File Iweghachite" mode.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi dekwasịzie faịlụ site mpụga nchekwa na ngwaọrụ, biko mee ka n'aka na gị mpụga nchekwa na ngwaọrụ nwere ike ghọtara dị ka a ike mbanye na gị Mac.
Nzọụkwụ 2 Ebe ị dị nnọọ mkpa ka họrọ nri ike mbanye ka iṅomi maka dekwasịzie faịlụ. I nwekwara ike nụchaa na scanning n'ihi na "Họrọ File Pịnye" kọlụm.
Rịba ama: I nwekwara ike "Kwado Deep iṅomi" ka mma scanning N'ihi kwa.
Nzọụkwụ 3 Mgbe iṅomi, niile hụrụ faịlụ ga-edepụtara ke ekpe nke window. Ị nwere ike ịlele ma hụrụ faịlụ ndị ihe ị chọrọ iji weghachite ma ọ bụ site faịlụ aha.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ faịlụ ị na-aga iji weghachi na pịa "Naghachi" zọpụta ha gị Mac.
Cheta na: Biko adịghị ịzọpụta natara faịlụ ka mbụ ọnọdụ, n'ihi na nke a ga-eduga data overwritten nke.
Na-ekiri ndị video nkuzi n'okpuru
Olee otú Naghachi ọdịnaya nke kọmpat Flash (CF) Kaadị
Western Digital Data Recovery: Olee otú iji weghachi Files na WD diski ike Drive
Ọ bụla Way naghachi ehichapụ Pictures si Blackberry Cell Phone
Nero maka Mac? Download Best Alternative ka Nero maka Mac
Olee otú iji tọghata OGG ka MP3 ma ọ bụ MP3 ka OGG on Mac OS X (Yosemite gụnyere)
Apple iWork maka Mac
SourceTec Software: Snood maka Mac
Adobe ezimezi oku CS4 maka Mac
Top 5 iPod ka Mac Nyefee Ngwaọrụ
MacBook File Iweghachite: Ina Back ehichapụ, formatted & Trashed faịlụ site na gị Mac
Best iPad File Explorer maka Mac
> Resource> Mac> Mac overwritten File Iweghachite: 3 Nzọụkwụ naghachi overwritten File si Mac